စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကြုံနေရတဲ့ မိသားစုဝင်တွေအတွက် လှူဒါန်းခဲ့ တဲ့ ဒီဇိုင်နာ မျိုးမင်းစိုး…. – Cele Snap
စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကြုံနေရတဲ့ မိသားစုဝင်တွေအတွက် လှူဒါန်းခဲ့ တဲ့ ဒီဇိုင်နာ မျိုးမင်းစိုး….
ဒီဇိုင်နာ မျိုးမင်းစိုး ကတော့ နာမည်ကြီး ဒီဇိုင်နာ အဖြစ်ရပ်တည် နေသလို ရရှိသမျှ ဝင်ငွေတွေကိုလည်း အမြဲလိုလို လှူဒါန်းမှု ပြုနေသူတစ်ယောက်ပါ။ ကိုဗစ်ကာလ အတွင်းမှာလည်း မကြာခဏ လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုခဲ့ပြီး အခုလည်း ကိုဗစ် ကြောင့်စားဝတ် နေရေး အခက်ကြုံနေတဲ့ မိသားစုတွေကို လှူဒါန်းခဲ့ပြန်ပါတယ်။
အလှူ အကြောင်းကို သူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ “ဒီနေ့အလှူ ၂၃-၁၂-၂၀၂၀ ဆန်(၂၄) ပြည်အိတ် ( ၃၄၀ )အိတ် ၊ PPE ဝတ်စုံ ၂၀၀ ၊ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုတ် (၉၀၀) တန်ဖိုးငွေစုစုပေါင်း ( ၁၆၇ )သိန်း (တစ်ရာခြောက်ဆယ်ခုနှစ်သိန်း) ဖိုးကို အဖြူရောင်နှလုံးသား လူမူရေးအသင်း နဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေစုပေါင်းပြီး ပြင်ဦးလွင်အနီးတဝိုက် မှာရှိကြတဲ့( covid ) ကြောင့် စားဝတ် နေရေး အခက်အခဲကြုံနေ ကြတဲ့အိမ်ထောင်စု ဝင်တွေကို လှုဒါန်းမှာပါ။
COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ် တုန့်ပြန်ရေးကော်မတီ ၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ မှ တဆင့်ပေးအပ်လှူဒါန်းပေးမှာပါ……ခုလိုအချိန်တွေမှာ လူတိုင်း အနည်းနဲ့အများ အခက်အခဲလေးတွေရှိနေကြပေမဲ့ လည်း ကိုယ့်ထက် ခက်ခဲတဲ့သူတွေအတွက်… ကိုယ်လည်း တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်လှူဒါန်းထားတဲ့ ကာလဒါနအလှူလေးတခုပါ။ ပါဝင်လှူနိုင်ခဲ့ရလို့ပီတိဖြစ်ရပါတယ်… အမြဲလှူဒါန်း နိင်တဲ့လက်တစ်စုံဖြစ်ပါရစေ.. ” ဆိုပြီးတော့ ရေးသားထားပါတယ်။
မျိုးမင်းစိုးကတော့ အလှူအတန်း များစွာပြုလေ့ ရှိတာကြောင့် ဘွဲ့တံဆိပ်တွေ လည်းရရှိထားသူပါတယ်။ အခုလည်း ကိုဗစ် ကာလ မှာ ဆက်တိုက် လှူဒါန်းနေတာဖြစ်ပြီး ပြင်ဦးလွင် အနီးတဝိုက်မှာ ရှိကြတဲ့ covid ကြောင့်စားဝတ် နေရေးအခက်အခဲ ကြုံနေကြတဲ့အိမ်ထောင်စုဝင်တွေကိုလှုဒါန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇိုငျနာ မြိုးမငျးစိုး ကတော့ နာမညျကွီး ဒီဇိုငျနာ အဖွဈရပျတညျ နသေလို ရရှိသမြှ ဝငျငှတှေကေိုလညျး အမွဲလိုလို လှူဒါနျးမှု ပွုနသေူတဈယောကျပါ။ ကိုဗဈကာလ အတှငျးမှာလညျး မကွာခဏ လှူဒါနျးမှုတှေ ပွုခဲ့ပွီး အခုလညျး ကိုဗဈ ကွောငျ့စားဝတျ နရေေး အခကျကွုံနတေဲ့ မိသားစုတှကေို လှူဒါနျးခဲ့ပွနျပါတယျ။
အလှူ အကွောငျးကို သူ့ရဲ့ဖဘှေ့တျချမှာ “ဒီနအေ့လှူ ၂၃-၁၂-၂၀၂၀ ဆနျ(၂၄) ပွညျအိတျ ( ၃၄၀ )အိတျ ၊ PPE ဝတျစုံ ၂၀၀ ၊ ခေါကျဆှဲခွောကျထုတျ (၉၀၀) တနျဖိုးငှစေုစုပေါငျး ( ၁၆၇ )သိနျး (တဈရာခွောကျဆယျခုနှဈသိနျး) ဖိုးကို အဖွူရောငျနှလုံးသား လူမူရေးအသငျး နဲ့ မိတျဆှေ သူငယျခငျြးတှစေုပေါငျးပွီး ပွငျဦးလှငျအနီးတဝိုကျ မှာရှိကွတဲ့( covid ) ကွောငျ့ စားဝတျ နရေေး အခကျအခဲကွုံနေ ကွတဲ့အိမျထောငျစု ဝငျတှကေို လှုဒါနျးမှာပါ။
COVID-19 ထိနျးခြုပျရေးနှငျ့ အရေးပျေါ တုနျ့ပွနျရေးကျောမတီ ၊ ပွငျဦးလှငျမွို့ မှ တဆငျ့ပေးအပျလှူဒါနျးပေးမှာပါ……ခုလိုအခြိနျတှမှော လူတိုငျး အနညျးနဲ့အမြား အခကျအခဲလေးတှရှေိနကွေပမေဲ့ လညျး ကိုယျ့ထကျ ခကျခဲတဲ့သူတှအေတှကျ… ကိုယျလညျး တဈတပျတဈအား ပါဝငျလှူဒါနျးထားတဲ့ ကာလဒါနအလှူလေးတခုပါ။ ပါဝငျလှူနိုငျခဲ့ရလို့ပီတိဖွဈရပါတယျ… အမွဲလှူဒါနျး နိငျတဲ့လကျတဈစုံဖွဈပါရစေ.. ” ဆိုပွီးတော့ ရေးသားထားပါတယျ။
မြိုးမငျးစိုးကတော့ အလှူအတနျး မြားစှာပွုလေ့ ရှိတာကွောငျ့ ဘှဲ့တံဆိပျတှေ လညျးရရှိထားသူပါတယျ။ အခုလညျး ကိုဗဈ ကာလ မှာ ဆကျတိုကျ လှူဒါနျးနတောဖွဈပွီး ပွငျဦးလှငျ အနီးတဝိုကျမှာ ရှိကွတဲ့ covid ကွောငျ့စားဝတျ နရေေးအခကျအခဲ ကွုံနကွေတဲ့အိမျထောငျစုဝငျတှကေိုလှုဒါနျးခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ရွှေဝါရောင် ဂါဝန်လေးနဲ့ ဘာဘီအရုပ်လေးတစ်ရုပ်လို့အထင်မှားလောက်အောင် လှနေတဲ့ အဆိုတော်နန်းဆုရတီစိုး